Toeram-pisotro misy rano amin'ny tanana manokana
Hatramin'ny fahazazàna, maneso antsika ny fehezan-teny hoe "manasa tanana." Ny maha-zava-dehibe sy ny maha-zava-dehibe io fombafomba io, izay ataontsika tsirairay isan'andro isan'andro, tsy hiresaka isika, mazava ho azy ny zava-drehetra. Ny lahatsoratra dia natokana amin'ny fomba fanaovana savony anaty trano amin'ny tananao manokana, satria noho izany dia tsy afaka miahiahy ny maha-ara-dalàna azy sy ny fiarovana azy ianao. Mariho fotsiny fa be loatra ny fomba fanamboarana ny savony savony amin'ny tanany manokana, saingy hamaritra ny fomba sarobidy indrindra sy tsotra. Noho izany, andeha isika hanomboka.
Azo antoka fa ny toe-javatra, raha misy sisa tavela amin'ny habeny sy karazany maro ao anaty savony, dia mahazatra ny rehetra. Ny famoahana ireo sombin-javatra izay efa tsy dia ilaina loatra ampiasaina, dia tsy miangona, satria misy fomba maro ampiasaina. Ahoana no atao mba hividianana solika sarotra? Voalohany, angonao ireo sisa tavela ao anaty fitoeran-tsaka iray ary alatsaho ao anaty lavaka tsara izy ireo. Tsara tokoa fa tsy misy ny sisa amin'ireo loko sy karazana samihafa. Amin'izao fotoana izao dia mila tavoahangy plastika na tavoahangy miaraka amin'ny mpaninjara ianao. Tokony hosasana tsara izy io. Avy eo, asio siramamy miisa 15 hatramin'ny 20 milimetatra ny siramamy voatoto.
Aorian'izay dia tokony hampidirina amin'ny tavoahangy kely ny glycerine. Ho ampy ny teôlôjia roa. Afaka mividy glycerine amin'ny famokarana pharmacy rehetra ianao. Aorian'ny fisotroana sotro-boankazo sy glycerine ao anaty tavoahangy, ampio savony maina sy ambony amin'ny rano mafana. Raha matevina ny plastika, tsara kokoa ny manambatra ireo zavatra entina ao anaty vata hafa mba tsy hamafana ilay tavoahangy amin'ny hafanana. Omeo tsara ny votoatiny, ary avelao hijanona roa na telo andro ny savony.
Toy izany koa no ahafahanao mamolavola anao manokana ny tranonao sy ny lasibatry ny zaza. Saingy raha toa ka azonao atao ny mikaroka karazan-tsavony ho an'ny tokantrano, dia tokony ho marina tsara ny fanomanana zanaka, amin'ny fampiasana savony mafy miaraka amin'ny marika "Baby". Mariho azafady, ity savony ity dia afaka tahirizina mandritra ny 30 andro mahery!
Soap "avy amin'ny scratch"
Ity sarotra ity dia sarotra kokoa, saingy hahazo savony tsaratsara kokoa ianao. Manomàna voamaina misy voanio voanio, menaka oliva ary kariary (85%, 10% ary 5%), ranom-boasary (50ml), ovy (KOH), mixer ary sauspan.
Eo am-pandehanana, atsangano ny setroka rehetra ary ampidiro am-pahamendrehana (KOH), mamporisika tsy tapaka ny fifangaroana. Rehefa levona tanteraka ny alika, dia asio rano. Hahazo ranon-javatra toy ny jelly ho an'ny tsy fitoviana ianao.
Esory avy eo amin'ny hafanana ny bois de rose ary ento ny mpangotraka mandra-pahamaivana. Io dingana io dia afaka manakaiky ny 20 ka hatramin'ny 60 minitra. Izany rehetra izany dia miankina amin'ny fomba mahery vaika ny mixer. Dia asio lavalava mandritra ny adiny telo ny dite, ary aza adinoina ny mampihetsi-po azy. Aorian'ny 20-25 minitra dia ho lasa mangarahara ny rano, saingy tsy midika izany fa efa vonona ilay savony. Mahaiza mora foana. Raha lany ao anaty rano mafana ilay sotro, dia tokony ho mazava tsara ny vahaolana enti-manavotra, tsy misy vongam-pamokarana, famafana sy fandokafana. Hokolokoloiko ilay izy mandra-pahavitanao izany.
Ny voka-dratsy entiny dia mafana, mandatsaka ao anaty tavoahangy misy dispenser. Soap, voaofana "avy amin'ny scratch", vonona ny hampiasaina.
Amboary ny habetsaky ny savony amin'ny rano. Ny rano bebe kokoa ampidirinao amin'ny volanao rehefa mahandro, ny savony tsy azonao. Raha eny, ny rano dia mety hosoloina ranom-boankazo, alàlan-kena ary ronono. Raha manomana savon-drivotra ianao dia ampio ireo zavatra ireo izay tsara ho an'ny hodinao ary tsy miteraka alikaola.
Aza hadinoina fa misy savony voafetra ao an-trano ny savony ao an-trano, satria tsy misy fikojakojana.
Azonao atao koa ny manao savony mafy amin'ny tananao, toy ny savony amin'ny kafe fanampiny .
Lalao avy amin'ny lamba amin'ny tanany
Ahoana ny fomba hanamboarana brôtôka avy amin'ny "fety Frantsay"?
Ahoana no fanaovana taratasy vera?
Mats from polyethylene packages
Fehezam-boninkazo miaraka amin'ny tanany
Ahoana no hanaovana barazy ho an'ny hazo krystaly?
Fanamboarana ny môle manan-tantely
Jean sy Paraskeva
Lehibe iray ao an-dalantsara - tsipiriany mahazatra
Visa ho an'i Panama
Brooklyn Beckham dia manana fitiavana miaraka amin'ny Lexie Panther, mpihira 28 taona sady mpandihy
Sakafo voatoto ao anaty lafaoro
Ahoana ny fomba hanampiana ankizy amin'ny teething?
Sakafo kalokalo misy ronono
Fiatoana eo amin'ny valindrihana